Militeriga Maraykanka oo Xaqiijiyay Inay Qaarijiyeen Afhayeenkii AlShabaab ee Gobolka Banaadir (Cali Jabal)
Taliska Milatariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ee (AFRICOM) ayaa xaqiijiyey in weerar duqeyn ah oo dhacay maalintii shalay ahayd lagu beegsaday, laguna dilay hoggaamiye sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab.
Cali Maxamed Xuseen (Cali Jabal) oo ahaa guddoomiyihii Al-Shabaab ugu magacownaa caasimadda Muqdisho, islamarkaana ka mid ahaa xubnaha ugu cod karsan kooxdaasi ayaa lagu dilay duqeyntii ka dhacday.
Bayaan kasoo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee (AFRICOM) ayaa lagu sheegay in Cali Maxamed Xuseen (Cali Jabal) uu ahaa qofka kaliya ee weerarka lagu dilay, islamarkaana aysan jirin wax khasaare shacab ah oo ka dhashay.
Taliska Mareykanka ayaa sheegay in howlgalkan ay la fuliyeen saaxiibadooda gobolka, wuxuuna sheegay in weerarkani uu ka dhacay deegaanka Tooro-Toorow uuna jawaab toos ah u ahaa ficillada Al-Shabaabka, oo ay ku jiraan weerarkii dhowaan lagu qaaday ciidamada Soomaalida” ayaa lagu yiri bayaanka.
Cali Maxamed Xuseen oo loo yaqaanay Cali Jabal, ayaa ganacsatada waaweyn ee reer Muqdisho ku qasbi jiray inay lacag sakawaad ah siiyaan ururka Al-Shabaab.
August 6, 2017 Geesey